NgoNovemba 5 ngo-1979 wazalwa esifundeni saseMoscow uLyubertsy, umlingisi wesimanje uFedulova Ekaterina Olegovna. Le ntombazane yakhula njengengane evulekile, ikhulula njalo abangane bayo emasosha. Ngokuyinhloko, uKatya wachitha isikhathi kanye no-Anya - udadewabo omdala, emgwaqeni eqenjini elihle elihle. Umlingisi wekusasa wafunda esikoleni esijwayelekile kunazo zonke futhi waya emakhishi ahlukahlukene.
Into ethakazelisayo kunazo zonke ukuthi iphupho elithandekayo likaCatherine omncane laliyisifiso sokuba isikhulu. Emndenini wezinkanyezi ze-movie ezizayo eziphatheka kahle kakhulu, ngakho-ke indlu ihlale inezilwane eziningi. Ngenxa yokuthi elinye lamalungu omndeni uletha izidalwa ezintsha eziphilayo, akekho oye wahlukumeza noma ubani. Kamuva kancane uKatra wanquma ukuba abe wezilwane - ngezwi, izilwane zamheha kakhulu.
Kodwa-ke, u-Ekaterina Fedulova wayeyintandokazi yakhe futhi wayevame ukushintsha ukuzijabulisa kwakhe ebuntwaneni bakhe. Ekuqaleni, le ntombazane yayifuna ngempela ukudansa, okwesikhashana yenza. Emva kwalokho waya esikoleni somculo - ukufunda ukudlala ipiyano. Kodwa akaphumelelanga kule nsimu, ngoba akazange amnike injabulo ekhethekile. Noma kunjalo, le ntombazane isesiphelile wonke amakilasi ayisihlanu esikoleni somculo. Wayebhekwa ngokuyinhloko ngugogo wakhe, ngakho uKatya kwadingeka adlale zonke izingoma ezinikezwe izikhathi ezimbili noma ezintathu ngosuku.
Ngokuhamba kwesikhathi u-Catherine Fedulova osemusha wathathwa ngemidlalo ye-equestrian, kodwa ayizange ihlale isikhathi eside. Le ntombazane yayithande amakilasi, kodwa leli qembu lalikude kakhulu nekhaya, ngakho kwadingeka ukuthi ihambe ekilasini. Ngazama uKayyusha ukuya ehholo lokuzivocavoca, kodwa ukuzivocavoca umzimba okungathandeki lutho akuzange kumkhange. Ngakho le ndlela yokuzilibazisa yayikhohliwe ngokuphepha.
Ubaba Ekaterina Fedulova wayengumdwebi wezithombe nomdwebo, futhi umama wami othandekayo wayengu-engineering engineer. Abazali - abantu bafundiswa ngokwanele futhi banenkululeko yentando yeningi, futhi ngenxa yalokho, ukukhulisa izingane zabo, bakhetha ukuzikhawulela. UKayya wayelokhu ezwa inkululeko ephezulu, abazali bakhe abazange baphoqele ukwenza noma yini ngokuphoqelela, kuphela ukukopisha ngobumnene ukuthi bangakwenza kanjani kangcono. Ucindezelo lwaluzwakala kuphela ohlangothini lukagogo - kanye nje nguthisha oqinile.
Ukuqala komdlali wefilimu
Amaphupho emahlathini kaCatherine ayingxenye yesikhathi esidlule sibonga udadewethu omdala u-Anna. Lapho ebona eMoskovsky Komsomolets isimemezelo mayelana nokudubula kwefilimu entsha phakathi kwabantwana abaneminyaka engu-9-11 ubudala, le ntombazane yanquma ukuphoqa udade osemncane ukuba avivinye. U-Ekaterina Fedulova akazange aqaphele noma yini futhi wavuma ukuzizama e-cinema ngokumane "ngenxa yehlaya." Noma kunjalo, omunye wemisebenzi efilimu ethi "Whistler" uKatya wamukelwa. Le ntombazane yayithokozile kakhulu ekusebenzeni kumafilimu, ukuthi ngokushesha yanquma ngokukhetha umsebenzi ozayo.
Iminyaka yobudala obunzima
U-Ekaterina Fedulova akazange ahlanganyele nephupho lakhe elisha futhi ngemva kokuphothula iziqu waya eMoscow, esikoleni esiphakeme sezemidlalo. Kodwa-ke, le ntombazane ayizange ihlangabezane ne-capital ngezingalo ezivulekile - uKatya "ngempumelelo" wehlulekile. Ukunquma ukuzama isandla ngonyaka ozayo, uCatherine waqala ukulungiselela - kodwa futhi ukuhluleka. Iminyaka emihlanu, umlingisi wekusasa uzama ukwenza okuthile - "waqhuma" iGITIS, VGIK, Shchukin nezinye izifundiswa, kodwa konke akusizi ngalutho.
"Ukuze ngihlale ngenduku yabazali bami" uKatya wayengafuni, ngakho wazama ukuthola imali - khona-ke umdayisi, wabe engunobhala, wabe esengumfundisi. Lapho eneminyaka eyisishiyagalombili ubudala, le ntombazane yalahlekelwa abazali bayo. Ngenyanga eyodwa bafa - umama wabulawa ngesifo esibi kakhulu, uyise we-actress wabulawa. Ukusekelwa kuphela kukaCatherine kwahlala ugogo nodade osekhulile, osixhasa yena nsuku zonke ngesisa nokufudumala.
Umsebenzi we-Actor - uqale kuphi?
Kodwa-ke, u-Ekaterina Fedulova - umlingisi wakhe "umoya wokulwa" owakhuthaza konke ukuvivinywa okuwile, wafaka kuye ukuthi uyomethemba. Ekugcineni, usakwazi ukufaka umnyango osebenzayo we-International Slavic Institute. Naphezu kweyunivesithi ekhokhelwe, umncintiswano wawukhulu kakhulu, ngakho intombazane yayinzima. Ukusekelwa ngokwezezimali ezifundweni zakhe kwanikezwa udadewabo kaCatherine.
Phakathi nezifundo zakhe, uKatya wagxila kulolu chungechunge oluthi "Marsh Turetskogo" nelithi "ama-Amazons aseRussia", kanye nakwezinye izikhangiso. Esikwenzeni imfundo yezikole, uCatherine wanikezwa izindima ezihlukahlukene - kokubili amahlaya kanye nosizi. I-comedy role role actress, noma kunjalo, wayethanda okuningi.
"Peter FM" - isithombe esiletha impumelelo
Uphothule e-Ekaterina University ngo-2004 futhi ngokushesha wathola indima enkulu efilimu u-Oksana Bychkova "Peter FM". Indima eyinhloko ye-DJ okuthiwa ngu-Masha, le ntombazane yamukelwa ngokujwayelekile - emva kokuhlolwa nokuhlolwa kwezithombe.
Ukuze abe ngeso lengqondo ngangokunokwenzeka ngesithombe se-heroine yakhe, umlingisi kwakudingeka asebenze amasonto amabili emsakazweni "Maximum", uthathe amakilasi aphezulu, futhi lokhu akusebenzi lutho. Njengoba ayejwayele kakhulu indima, wenza izethameli zikholelwa ukuthi ngempela uyi DJ yangempela.
Amanye ama-movie adumile
Cishe kufanelana nokuqopha kwefilimu "Catherine FM" Catherine waba yingxenye yochungechunge lwe-TV enempumelelo njenge "Case Kukotsky" kanye "Abavakashi". Ngokushesha emva kokuqoshwa kukaCatherine "uPeter" wamenywa ezikhundleni eziyinhloko kumafilimu "Forty" no "Isivivinyo".
U-2009 waletha inkazimulo ye-actress kule filimu ethi "Tender May", echaza umlando weqembu elidumile le-pop. Kulo mfilimu, uCatherine waba nendima kaLily - intombazane u-Andrei Razin. Isakhiwo sothando kanye nempumelelo yale filimu sakhuthaze umdlali wezemidlalo ukuba aphikelele nakakhulu emkhakheni wokwenza. Futhi ngonyaka ofanayo uFedulova ususwe kwezinye amafilimu amaningana - uDesantura, Governess noLapushki, ukwenza indima lapho (umphenyi uNedelko) umlingisi kufanele afunde okuyisisekelo sobuciko bokulwa.
Sebenza emidlalo yaseshashalazini, ngokusho kuka-Ekaterina Fedulova, umlingisi wangempela ubalulekile. Njengoba kuwukuqeqeshwa okuhle kakhulu. Kodwa-ke, ngenxa yokuqopha, umlingisi kwakudingeka alahlekelwe wonke amaqoqo emidlalo. Kodwa abangane bentombazane babesakwazi ukusiza - ngenxa yokusekela kwabo, ngemva kokubuyela eSt. Petersburg, uCatherine wacishe wajoyina umsebenzi ethi "Funda, funda, ufunde ..." - ukusebenza okuthakazelisayo okusebenzayo. Ngokuhamba kwesikhathi, uKatya wahlangana nomqondisi weTsaritsyn TYuZ, owamemela emdlalweni wakhe omusha obizwa ngokuthi "Upside Down".
Namuhla, umlingisi uhlanganyela njalo emisebenzini ye-anterprise. Ukusebenza komculo "I-Bat" kanye nokubambisana okubili nokubandakanyeka kukaLyudmila Gurchenko - "Injabulo yengozi yephoyisa uPeshkin" nelithi "Ukuvakasha Sabineanenov" yasize umdlali wezemidlalo ukufunda okulula kakhulu futhi ngokushesha ukujwayela indima ethembekile esikrinini.
Ngakho, ifilimu ephelele yeCatherine Fedulova inkulu kakhulu. Ukubamba iqhaza, kubalulekile ukuphawula ukuthi kusukela nge-movie yayo yokuqala "u-Whistler" kuze kube yilolu suku umdlali wezithombe uhambe ngendlela enzima, kodwa enomusa kakhulu. Ngaphandle kokudweba okudumile okukhulunywe ngaye ngenhla , intombazane yadutshulwa kumafilimu ethi "Airport-2", "Buyela Ekhaya", "Operation Gorgon", "I-Courier evela ePharadesi", "Ngaphambi Kokudoba," futhi yabonisa indima kaConnie emlandweni wezinkondlo othi "The Night at Summer ".
Ukuphila komuntu we-actress
Ngendlela, umlingisi wekhono u-Ekaterina Fedulova, ongekho impilo yakhe engakahleleki, akhathazeki ngalokhu nhlobo. U-Katya ukholelwa ukuthi kungenzeka ukuba ubungane phakathi kwendoda nowesifazane, nakuba engaphiki ukuthi ubungane ngezinye izikhathi bangakhula baba yinto engaphezulu. Kuze kube manje, u-Ekaterina Fedulova, ogama lakhe lomuntu udadewabo omdala nomyeni wakhe nezingane zakhe ezimbili, uthi akasakashadi.
Kodwa-ke, yiqiniso, lo mdlali wathandana naye. Wahlangana nothando lwakhe lokuqala lapho engena esikhungweni. Le ndaba yothando yabambezeleka iminyaka eminingana. Umlingisi ukholelwa ukuthi lokhu kwakuyingxenye ethinta kakhulu impilo yakhe, ngoba uthando lokuqala, luthi luyinto ephazamisayo futhi ejabulisayo. Uthando lwabantu abasha lwaluyintandokazi, ngakho-ke uKayya wayenemikhumbuzo enhle kakhulu yale nkathi. Kwabe sekukhona olunye uchungechunge lwamanoveli, kodwa akukho lutho olunzulu.
Namuhla, njengo-Ekaterina Fedulova uthi, indoda ayiyona inkinga, kodwa, akukho phuzu ekuhleleni impilo yomndeni wakho. Umuntu kufanele athande ngempela, azizwe efisa ukuba njalo naye, futhi okubaluleke kakhulu, kufanele abe nomuzwa womlingani ofanayo nemizwa efanayo. Kusukela ngaleso sikhathi intombazana engazange ihlangabezane nomuntu onjalo, akasheshi ukushada.
Uhlu lwamafilimu amahle kakhulu okufanele wonke umuntu abone
Abadlali abanobuchule ngempela. "Ukuthula kwamaWundlu" kuwubucwebe obudalwa yibo
Umlingisi Richard Bright: umsebenzi, ama-movie, empilweni yakho
Dadewethu, umyeni wakhe ubani okumele nomkakhe nezingane zabo
Senethiwekhi kwezemfundo - Iyini?
Ukuhlolisisa olunzulu umzimba, eMoscow: uhlu imitholampilo kanye nokubuyekeza
Izimbali Chestnut - okwelapha futhi ewusizo olandelayo
Umbandamu Ukwelashwa kanye Izimpawu